Doodii mooshinka oo dhamaatay iyo Jawaari oo dhaariyey Xogheynta baarlamaanka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Doodii mooshinka oo dhamaatay iyo Jawaari oo dhaariyey Xogheynta baarlamaanka
Mareeg.com: Waxaa goor dhoweyd soo gebageboobay dooda xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ka yeelanayeen mooshinka ka dhanka ah RW Cabdi Weli Sheekh Axmed, waxaana saacadaha dhow la filayaa in xukuumadda codka kalsoonida loo qaado.
Gudoomiye Jawaari ayaa wax ka yar ka hor 12:00 duhurnimo ee xilliga Muqdisho ka baxay hoolka shirka, si uu u dhaariyo xogheynta baarlamaanka oo laga doonayo iney si cadaalad ah u tiriyaan codadka xildhibaanada marka codka la qaadayo.
Dhanka kale, 2 xildhibaan oo ka hadlay baarlamaanka ayaa sheegay iney ka laabteen saxiixa mooshinkii ay wax ka diyaariyeen ee ka dhanka ahaa RW Cabdi Weli Sheekh Axmed.
Lama oga sida ay ku dhamaan doonto natiijada cod u qaadista xukuumadda oo si weyn ay ugu kala duwan yihiin xildhibaanada.
Codka loo qaadayo xukuumadda RW Cabdiweli oo bilaabatay